शिक्षित, अशिक्षित र दुस्ट… | नेपाल इटाली डट कम
शिक्षित, अशिक्षित र दुस्ट…
May 4, 2012 — nepalitaly
तिम्रा जस्ता छैनन् मेरा दिनहरू रमैला तर म यी दिनहरूलाई थप दु:ख अनि आँशु सँगै रङिन बनाउन चाहन्छु। तिम्रो जस्तो छैन भाग्य मेरो तर जे छ जस्तो छ त्यसलाई स्विकार्दै आफ्नो कर्म निभाउन चाहन्छु। मेरो भाग्यमा छैनन् हास्ने खेल्ने रमाउने घुम्ने हराउने तर जे छ त्यसलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बाध्न चाहन्छु। बाधा हजारौं छन् बाधा नै सफलता को खुद्किला मान्दै कत्ति डर भर नलीई अगाडि बढ्न चाहन्छु। बाधा,चोट, आँशु, चट्पटी, दु:ख, पिडा आनि संघर्ष बिनाको जिन्दगी के जिन्दगी? त्यसैले यी सबै जिन्दगीमा आउछन् यसलाई असफल जिन्दगी भन्न मिल्दैन यो नई सफल जिन्दगी हो सुरुवात हो र अन्त्य हो। बच्चा सानोमा रोएन भने उक्त बच्चामा केइ समस्या छ भन्ने बुझिन्छ र रोओस भन्ने चाहन्छन त्यस्तै दुख पीडा अनि संघर्ष बिनाको जिन्दगीमा कुनै न कतै समस्या आउछ त्यसैले जिन्दगी मा दु:ख आउनु पर्छ समस्या हुनु पर्छ आँशु झार्नु पर्छ। यसो हुँदा तपाईंलाई कुनै दु:ख नौलो र कठिन हुन्न र आँशु झर्दा धेरै चित्त दुख्दैन। तिमी हराउछौ आजको दुनियाँमा कुरा गर्छौ भोलिको म हराउछु अहिलेको दुनियाँमा कुरा गर्छु आजको। भोलि भनेको आजको परिनाम हो। आज हामीले गरेको गरेको कर्मको फल। भन्थे सत्य युगमा एउटा जूनीमा गरेको पापको फल म्रित पस्चात अथवा अर्को जुनिमा देखिन्थियो रे। कथा महपुरान बाट पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर आजको युग त्यस्तो छैन्।
जति जति मनिसमा पाप धर्मको ज्ञान कम हुँदै गएको छ त्यति नई आफूले गरेको पापको फल भोग्ने मिती सोही जूनीमा भोग्ने दिन नजिकिदै गएको हुन्छ। त्यसैले त भन्ने गरिन्छ अहिलेको युगमा पापको फल देख्न अर्को जूनी लिनु पर्दैन सोही जुनिमा देख्न पाईन्छ। बाँच्न मात्र पर्छ के के देख्न पाईन्छ। पाप धर्मको फल मनिसले पाइनै रहेका हुन्छन् तर पनि आफूले गरेको दुष्कर्म पनि बिर्शिदै गएको हुन्छ यानिकी आफ्नै हिजोको कार्यले यो फल भोगिरहेको छू भन्ने कुरा सम्झन चाहदैनन। यहा जानि जानि दुष्कार्य गर्ने र यस्मा साथ दिने मनिसहरू कहिले पनि आफूले के गरिरहेको छू भनेर महसुस गर्न पनि छहदैनन। साधारण जनजिबनमा त अज्ञानको कारण यस्तो घटना सामान्य रुपमा घाटीरहेकै हुन्छ त्यो त उनिहरुको जीवन यापन नै हो र अशिक्षाको कारण पनि हुन सक्छ। तर शिक्षितहरुमा यो समस्या धेरै देखिन्छ। भनिन्छ नजान्नेलाई नबुझ्नेलाई सम्झाउन र बुझाउन सकिन्छ। शिक्षित भन्दा अशिक्षित कम् खतरनाक हुन्छन्। शिक्षितले प्लान अनुसार् षद्यन्त्र गरेर दुस्ट काम गर्दा धेरैलाई नराम्रो असर पुगिरहेको हुन्छ तर अशिक्षितले अशिक्षाको कारण गरेको दुष्कार्य नई अपराध बनिरहेको हुन्छ। तर शिक्षितलाई न सम्झाउन सकिन्छ न त सम्झने कोशिश् नै गर्छ। यिनीहरूमा आफू जान्ने आफु बुझ्ने भन्ने घमन्ड हुन्छ र आफूले गरेको सबै कुरा ठीक भन्ने भ्रममा जे मन लाग्यो त्यहि गर्न खोजिरहेको हुन्छन। प्रकृति बिपरित गएको याद पनि गर्दैन। र आफूले गरेको दुष्कर्मको परिनाम स्विकार्न पनि चहदैन। यस्ले दोशी दोश मुक्त बन्ने प्रयास मात्र गर्छ तर प्रभाब निर्दोशलाई पुग्छ र जिन्दगी नाई अस्त ब्यस्त बन्न पुग्छ। यो सबै सत्य तथ्य देख्दा पुझ्दा पढ्दा के कसलाई पढ्न मन लाग्छ? के शिक्षित बन्नु भनेको प्रकृति बिपरित जना प्रकृतिको अनुमति पाउनु हो?
#PS कृपया यो सबैमा लागु हुदैन र परिकल्पनामा अधारित भएकोले कसैको जनजिबनमा मेल खान गए सँयोग मात्र हुने छ।
« साइबर नशा
कहाँ छ भन्ने होला.. »